प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई सुदूरपश्चिममा निषेध किन नगर्ने ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई सुदूरपश्चिममा निषेध किन नगर्ने ?
देउवालाई खुला पत्र
प्रधानमन्त्रीज्यू, जतिसुकै सफलताको आकाशमा विचरण गर्नूस्, सुदूरपश्चिमसँगको धागो चुँडिएको दिन भुईँमा बेवारिसे तवरले बजारिनुहुनेछ
२०७९ असार ३, शुक्रबार १४:४९:००
बालुवाटार, काठमाडौँ ।
भनिन्छ– समुद्र जतिसुकै ठूलो होस्, मूलसँग उसको सम्बन्ध टुटेको दिन सुक्छ । पहाड जतिसुकै अग्लो होस् । भुईँ छाडेको दिन त्यो पनि ढल्नुपर्छ ।
तपाईँ शेरबहादुर देउवा पनि अहिले देशको सगरमाथा बन्नुभएको छ । तपाईँ यति अग्लो ठाउँमा बारम्बार पुग्नुहोला भनेर गन्यापधुरा वा डडेलधुरावासीले सायदै सोचेका थिए । अहिले पनि सुदूरपश्चिममा जन्मेहुर्केको मान्छे यो तहको सपना देख्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले तपाईँको यो उचाइ र सफलता अकल्पनीय छ ।
तपाईँको व्यक्तित्व फैलिएर आज विशाल महासागरजस्तो भएको छ । यो त झन् कुनै नेपालीले हत्पत्ति कल्पना गर्न सक्ने विषय होइन । सारा देशवासीका निम्ति पाचौँपल्ट देशको प्रधानमन्त्री हुनु र अझै बन्ने सम्भावना जीवितै रहनु सहज र सम्भव विषय होइन ।
तर म विनम्रतापूर्वक स्मरण गराउन चाहन्छु कि तपाईँको सफलताको धागो सिधै सुदूरपश्चिमको गन्यापधुरासँग जोडिन्छ । यहाँको असीमित उचाइको जग सुदूरपश्चिममै उभिएको छ । अनि सम्भावनाको असीमित विशालताले भरिएको व्यक्तित्वको मुहान सुदूरपश्चिमकै महाकालीबाट उत्पत्ति भएको छ । त्यस भूमिसँग जोडिएको नाता टुटेको दिन यहाँको सम्पूर्ण व्यक्तित्व गर्ल्यामगुर्लुम ढल्नेछ । त्यो महासागर एकैपटकमा सहारा मरुभूमिमा परिणत हुनेछ । तपाईँ जतिसुकै सफलताको आकाशमा विचरण गर्नूस्, सुदूरपश्चिमसँगको धागो चुँडिएको दिन भुईँमा बेवारिसे तवरले बजारिनुहुनेछ ।
हुन त यति कुरामा यहाँ जानिफकार नै हुनुहुन्छ । यहाँले नभए यहाँको वरिपरिको विशद् विद्वत् मण्डलीलाई विश्व ब्रम्हाण्डको थाहा नभएको कुरा केही छैन ।तैपनि यस पंक्तिकारको गर्धन चिलाएकै सही । केही बिन्ती बिसाउने धृष्टता गरेँ ।
यदि तपाईँ सुदूरपश्चिमसँगको नाता कायम राख्न चाहनुहुन्छ र सुदूरपश्चिमवासीको व्यथा साँच्चै अनुभूत गर्न चाहनुहुन्छ भने तीन दिनको समय निकालेर गाडीमा पश्चिम यात्रामा निस्कनुहोस् । जसरी गएको स्थानीय तह चुनावमा सुदूरपश्चिममै बसेर धनगढी–अमरगढी ओहोरदोहोर गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी यहाँ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको यात्रा गर्नुहोस् ।
डडेल्धुराबाट छुटेको बसका कर्मचारीले यात्रुलाई कस्तो व्यवहार गर्छन् त्यो हेर्नुहोस् । बाटामा ट्राफिक र अरु प्रहरीले बसका कर्मचारी र यात्रुसँग गर्ने व्यवहार पनि नजर गर्नुहोस् । बाटामा कस्तो ठाउँमा र कुन समयमा खाना खुवाउन गाडी रोकिन्छ, अनि कति रूपैयाँ असुलिन्छ, त्यो पनि हेर्नुहोस् ।
सुदूरपश्चिममा पढ्नका लागि राम्रो कलेज छैन । उपचार गराउन अस्पताल छैन । कि काठमाडौँ आउनुपर्छ, कि दिल्ली जानुपर्छ । एकजना बिरामी लिएर आउने हो भने उसको सास काठमाडौँसम्म पुर्‍याउनै मुस्किल छ । बाआमालाई एकसरो लुगा फेरिदिने आशाका साथ विदेश जान चाहने भर्भराउँदो उमेरका युवाले आफ्नै गाउँमा जन्मेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको आफ्नै देशको बाटामा पाएको सास्तीवापत् यहाँलाई कति आशिर्वाद मिल्दो हो ? त्यो पनि अनुमान गर्नुहोस् ।
डडेल्धुराबाट करिब ७०० किलोमिटरको यात्रा गर्दा १८ देखि २० घण्टा लाग्नुलाई त सुदूरपश्चिमवासीले सामान्य मानेकै थिए । बाटामा खुवाउने स्तरहीन खानाका लागि ३५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थालाई पनि अन्यथा भनेका थिएनन् । अनि गाडी व्यवसायी र कर्मचारीको हेपाहा शैलीलाई पनि उनीहरुले आफ्नो नियति नै ठानेका थिए ।
हुँदाहुँदा अब सरकारले सडक नै धराप बनाएर छाडिदिएको छ । जब दाउन्ने खण्ड सुरु हुन्छ, अनि जीवनभरका सारा सास्तीलाई एकसाथ सम्झाउने गरी यातना र ताडना सुरु हुन्छ ।
१५ किलोमिटर पार गर्न यहाँ ६ घण्टा लाग्छ । कतिका विवाहको लगन बाटामै गुज्रिएको छ । कति सुत्केरीको ज्यान बाटामै गएको छ । पानीपानी भन्दा पनि पानी नपाउने अवस्था छ ।
सवारीको लस्करभित्र छिरेपछि न अगाडि जान सक्नु, न पछाडि फर्किन नै । न दायाँ न बायाँ । पहिरो नखस्दा पनि, एउटा गाडी नबिग्रिँदा पनि सात–सात घण्टा निस्सासिने जाममा बस्नुपर्छ ।दिसा–पिसाब आउँदा पनि गर्ने ठाउँ छैन । साना बालबच्चा लिएर हिँड्दाको यातना कसरी वर्णन गर्नु ? त्यहीबीचमा कुनै गाडीमा गडबडी आयो भने ७ होइन, १४ घण्टा जाममा उकुसमुकुस भएरै मरिएलाजस्तो हुन्छ ।
बिनाकारण सवारी जाम हुन्छ । मालवाहक सवारी सडकमा बिग्रने र सडक एकतर्फी हुँदा लागेको जामको लहरो कहिल्यै नसकिने हुन्छ । साँघुरो सडकमा सवारी साइड लगाउन नमिल्दैन । वैकल्पिक बाटो छैन । चुस्त सूचना र उद्धारको प्रणाली छैन ।
बाटामा सानो कुनै दुर्घटना भए पनि त्यो पन्छाउन मात्रै करिब चार घण्टा लाग्छ । फोन नलाग्ने, पहाडी क्षेत्र र जंगल भएका कारण यात्रु भोकभोकै हिँड्नुपर्ने समस्याको त कुनै हिसाबै छैन । धूलो, खाडल र सवारी जामका कारण मर्नु न बाँच्नु हुन्छ । यति ठूलो राजमार्गमा एम्बुलेन्सलाई समेत बाटो दिने ठाउँ छैन । बाटामै बिरामीको सास न वास हुने अवस्था छ ।
दाउन्ने खण्डको उकालो–ओरालोमा घुमाउरो मोड र साँघुरो सडकले कहाँनिर गाडी पल्टिने हो भन्ने ठेगान हुन्न  । क्रेन झिकाएर उद्धार गर्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ ।
जीर्ण सडकमा ठूला सवारी यही खण्डमा बढी बिग्रिन्छन् र दुर्घटना हुन्छन् । सडक भासिने र भत्किने समस्या उस्तै छ । धूलो र हिलोको त अब कसले हिसाब गरोस् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारको शिलान्यास भएको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । अहिलेसम्मको प्रगति १० प्रतिशत पनि भएको छैन ।२०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीबाट सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए । ४२ महिनाभित्र काम सक्ने सम्झौता थियो । त्यसको म्याद आउँदो साउनमा सकिँदै छ । तर यही गतिमा काम हुने हो भने १० वर्षमा पनि काम सकिन मुस्किल छ ।
११४ किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा सहरी क्षेत्रमा ६ लेन, जंगल एवं ग्रामीण क्षेत्रमा चार लेन र दाउन्ने खण्डमा भौगोलिक कठिनाइका कारण तीन लेनमा विस्तार गर्ने भनिएको छ । गैंडाकोट–दाउन्ने ६५ किमी सडकलाई खण्ड १ (पूर्वी खण्ड) र दाउन्ने—बुटवल ४९ किमी सडकलाई खण्ड २ (पश्चिम खण्ड)मा छुट्याएर सँगसँगै दुवैतर्फ काम गर्न थालिएको छ । दुवैतिरको काम चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले पाएको छ ।
कामको तरिका हेर्दा यो कहिल्यै सम्पन्न नहुने र केवल यात्रुलाई यातना मात्र दिने किसिमले भइरहेको छ । अझ सडक विस्तारको काम सुरू भएपछि बिग्रिएको–भत्किएको बाटो मर्मतको कामसमेत ठप्प भयो । नयाँ बन्नु त कहाँ हो कहाँ, भत्किएका ठाउँमा मर्मत नहुँदा यात्रु मात्रै नभएर स्थानीयले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।
बर्खामा बाढीका कारण डाइभर्सन बग्न थालेका छन् । यसले राजमार्ग नै बन्द भएर अब पश्चिम नेपालका बासिन्दा काठमाडौँ आउनै नपाउने अवस्था बन्ने जोखिम बढेको छ । सीमित खर्चमा काठमाडौँ पढ्न आउने विद्यार्थी, उपचार नपाएर छटपटाउँदै आउने बिरामी अनि भारतदेखि नेपालमा रमाउन आउने पर्यटकले बाटाभरि पाउने यातना, ताडना र हैरानी यहाँले पनि सपरिवार गएर अनुभव गर्नुहोस् । अनि त्यसपछि मात्र यहाँले आफूसँगसँगै श्रीमती आरजू देउवा र छोरा जयवीरका लागि पनि सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा ठाउँ खोज्नुहोला ।
आरजू पहिलोपल्ट हारेर कैलालीबाट दोस्रोपटक चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । डडेल्धुरामा आफ्नै वडा अर्कै पार्टीले लगिसकेको छ । कर्ण मल्लको विद्रोहले कांग्रेसलाई ठूलै धक्का पुर्‍याएको छ । आफ्नो पार्टीमा विश्वास गुमाउँदै गएपछि यहाँले राजनीतिमा सान्दर्भिकता जगुमाइसकेका माधव नेपाल र प्रचण्डहरुको वैशाखी टेकेर राजनीति जोगाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । तर यो नित्तान्त अस्थायी र निकै असुरक्षित बाटो हो ।
यहाँको राजनीति जोगाउने जीवित बाटो भनेको महेन्द्र राजमार्ग नै हो । अर्थात् सुदूरपश्चिमवासीको जीवनलाई सहज बनाइदिन सानो मात्र पहल गरिदिनुभए पनि त्यसको गुन त्यहाँका वासिन्दाले तिर्छन् ।
२०४८ सालयता तपाईँलाई सुदूरवासीले कहिल्यै हराएनन् । त्यसको बदलातामा तिनलाई मैले के दिएँ भनेर पनि एकान्तमा सोच्नुहोस् न । के सुदूरपश्चिमवासीको पीडाले यहाँलाई पोल्दैन ?
ती रैतीहरू त्यस्तै रहनुपर्छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो भने बेग्लै कुरा । होइन भने एकपटक आफै सुदूरपश्चिमवासी भएर दुई दिन मात्र भए पनि बाँच्ने कोसिस गर्नुहोस् । डडेल्धुराबाट काठमाडौँ आइपुग्न ३६ घन्टाले पनि नपुग्ने भएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युतदेखि मेडिकल कलेजका झुटा वाचाको हिसाब गर्दै गरौँला । काठमाडौँसँग जोड्ने एक मात्र राजमार्गको कष्टपूर्ण यात्रामा केही मात्र भए पनि सजिलो बनाइदिनुहोस् ।
ठेकेदारले काम गर्दै गरोस् । यस ठेकेदारको बदमासी छ भने म्याद नथपे भइहाल्यो । कर्मचारीले राम्रोसँग नहेरेको भए ठाउँको ठाउँ कारवाही गरे भइहाल्यो । तर अब २ खण्डमा होइन, १२ खण्डमा विभक्त पारेर काम अलगअलग ठेकेदारलाई काम दिनुपर्छ । वैकल्पिक बाटोमा अस्थायी पिच वा ढलान गरेर पनि यात्रा सहज बनाउन सकिने होइन । यसका निम्ति नेपाली सेना परिचालन गर्न पनि सकिन्छ । यस्तै आपत् पर्दा त हो नि । नत्र किन चाहियो यो लाखभन्दा बढीको सेना ।
यत्ति पनि नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, अब काठमाडौँबाट पश्चिम नगए हुन्छ । पश्चिमका बासिन्दाले यहाँलाई धिक्कारिरहेका छन् । धनगढीमा देउवाविरोधी नारा त्यसै लागेका छैनन् । डडेल्धुरामा देउवाकै पार्टीबाट विद्रोहको लहर त्यसै चलेको छैन । गन्यापधुरामा देउवाकै वडामा कांग्रेस त्यसै पराजित भएको छैन । आरजुको क्षेत्र धनगढीमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले त्यसै धुलो चाट्नुपरेको छैन । त्यसभित्र ठूलो अर्थ छ । देउवा परिवारप्रति सुदूरपश्चिमको मनोभाव छ ।
अझै पनि सुदूरवासीको पीडालाई आफ्नो पीडा सम्झेर पहल नलिने हो भने म यहीँबाट आह्वान गर्छु कि देउवा परिवारलाई अब सुदूरपश्चिममा निषेध किन नगर्ने ?